www.camaloow.com - News: Isbaarooyin kusoo Baday Gobolka Sh.Hoose iyo Xildhibaan Dhalxa oo ka Digay ................
December 10 2018 07:18:39
Isbaarooyin kusoo Baday Gobolka Sh.Hoose iyo Xildhibaan Dhalxa oo ka Digay ................
<?php </a> Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dalbaday Wasaarada Difaaca ee Xukuumadda Soomaaliya in ay wax ka qabato dhibaatooyin shacabka Gobolka Sh.Hoose ku heysto Degaano ka tirsan Gobolkaasi.
Prof, Maxamed Cumar Dalxa ayaa tilmaamay in Rag ku labisan dareeska Ciidamada Dowladda in ay jidgooyooyin dhigteen Deegaano ka tirsan Gobolka Sh.Hoose kuwaasi oo lagu dhibaateeyo Shacabka ku dhaqan Gobolkaasi.
Dhinaca kale, Xildhibaan Dalxa ayaa sheegay in Odayaasha Gobolka Sh.Hoose ay u soo gudbiyeen dhibaatooyinka lagu hayo Shacabka iyo Gaadiidka halkaasi isaga kala goosha isagoo carabka ku dhuftay meelaha ugu daranna ay tahay Degmada Afgooye.
Mr. Dalx ayaa tilmaamay in Maamulka Degmada Afgooye uu yahay mid dabacsan islamarkaana loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo.
Hadalka Xildhibaanka ayaa waxuu imaanayaa Xili Muddooyinkan dambe ay cabasho ka soo yeereysay Dadka ku dhaqan Gobolka Sh.Hoose taasi oo ku aadan dhibaatooyin sida ay sheegayaan ay ku qabaan isbaarooyin la soo dhigay Degaano ka tirsan Gobolka Sh.Hoose.
· xassan on November 09 2015 · 0 Comments · 29059 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,903,952 unique visits